Ukulungiselela nokuhlanganisa i-risotto - yile ndlela i-risotto yakho iphumelela ngayo
Yini engahlanganiswa ekulungiseleleni i-risotto?
Amaphutha okugwema lapho ulungiselela i-risotto
Abantu abaningi bathanda ukuzama izitsha ezintsha ngokuphindaphindiwe ukuze benze izinhlobo ezihlukahlukene zokudla kwabo kwansuku zonke. Isidlo esithandwa kakhulu emakhishini amaningi angasese nakwezokudlela yi-Risotto. Isidishi selayisi cishe sithandwa kakhulu ngenxa yokuthi ungayishintsha kahle kakhulu futhi uyiphakamise ngazo zonke izithako.
Iyini i-risotto noma kunjalo?
I-Risotto ivela enyakatho ye-Italy kanye ne-mushy irayisi dish. I-risotto enhle iyisikhilimu, kepha ukuhambisana kwelayisi kusekhona "al dente".
I-risotto yendabuko namakhowe, amakhambi amasha kanye ne-Parmesan
Ukulungiselela okuyisisekelo kulula kakhulu: Lapha, ilayisi elingagcokile livele ligcwele u-anyanisi kanye nebhotela elincane noma amafutha futhi liphekwe emhluzeni kuze kube yilapho isidlo sinomtholo okwanele.
Yiqiniso, kufanele futhi kuthathwe ukunakekelwa ukubona ukuthi iyiphi irayisi esetshenzisiwe. Akuzona zonke izinhlobo zelayisi ezifanelekile lokhu kulungiselelwa okunomsoco welayisi. I-rice okusanhlamvu ejwayelekile ijwayele ukusetshenziselwa, njengoba ikhulula isitashi esanele, okuyiyona eyabangela ukuthungwa okomuncu.
I-Rice pudding, ngakolunye uhlangothi, ayifanele nhlobo, njengoba ipheka ngokushesha kakhulu futhi ekugcineni ayikwanele ngokwanele kule dish. I-Risotto ingasetshenziswa njengenkambo eyinhloko noma ngokuhambisana nezitsha eziningi zenyama.
I-Risotto ingalungiswa ngezindlela eziningi ezahlukene. Izithako eziyisisekelo ze-rice dish ziyi-rice, u-anyanisi, amafutha kanye nanoma ngubani ofuna ukuthatha iwayini elincane ngaphezu kwamanzi. Ngokunye okunye kuyindaba yokunambitha, ngoba unganikela cishe zonke izithako e-risotto.
Ukupheka kwesinkwa somlilo kanye nesinkwa
Okuthandwa kakhulu yiParmesan Risotto. Ngalesi sizathu, isidlo sikulungele njengoba kuchaziwe ngenhla. Lapho nje irayisi ipheka futhi konke kunama-mushy, engeza ibhotela neParmesan kulayisi. Usuvele usungula i-risotto enhle kakhulu yeParmesan.
Ngisho i-risotto yama-mushroom ivame ukukhethwa njengenkambo eyinhloko noma i-side dish. Lapha nawe ulungisa konke ngokuvumelana nokuhlela nokujula ama-mushroom nge anyanisi epanini elingeziwe. Khona-ke unikeza konke ngaphansi kwesisindo. Ama-parmesan nama-mushroom angabuye ahlanganiswe, okuyiqiniso kuncike ekunambeni kwakho.
Enye yeziphambeko eziqala kakhulu ekulungiseni ukuthi irayisi iphekwe isikhathi eside kakhulu. Lokhu kumane kwenza ubukhulu bube buthaka kakhulu. Kodwa-ke, irayisi kufanele isabe "i-al dente" ukuze iveze iphunga layo eligcwele kanye nenambitheka yezinye izithako.
Irayotto ilayisi akufanele futhi igezwe ngaphambilini, kungenjalo iyolahlekelwa amandla ayo futhi isidlo sonke ngeke sisebenze. Ngaphezu kwalokho, akufanele uhlale kude nesitofu isikhathi eside, ngoba irayisi ingashisa kakhulu futhi kufanele uqhube phakathi phakathi.
Indlela yokunambitha iwayini ngokufanele?
Ukunakekelwa kwezingane - Ukugoqa ngokufanele